Xinhua Myanmar - COVID-19 ကူးစက်ခံရသူနှင့်ထိတွေ့မိပြီးနောက် မိုက်ပွမ်ပီယို အသွားအလာကန့်သတ်နေထိုင်လျက်ရှိ
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မိုက်ပွမ်ပီယို
အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွမ်ပီယိုအား ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) North America
“နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွမ်ပီယိုဟာ COVID-19 ကူးစက်ခံရသူနှင့်ထိတွေ့ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့၏မူဝါဒအရ အဲဒီလူဟာ ဘယ်သူဆိုတာတော့ ပြောပြလို့မရပါဘူး။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့ ရောဂါစမ်းသပ်စစ်ဆေးရာမှာ ကူးစက်ခံရခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ CDC လမ်းညွှန်ချက်များအရ သူဟာ ကန့်သတ်နေထိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ဌာနဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
ပွမ်ပီယိုနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းများသည် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း အားလပ်ရက် ပါတီပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အမေရိကန် မီဒီယာကဝေဖန်ပြောကြားထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2020-12-16 23:47:10|Editor: huaxia
WASHINGTON, Dec. 16 (Xinhua) -- U.S. Secretary of State Mike Pompeo will be in quarantine after contact with someone who tested positive for COVID-19, the U.S. State Department said inarelease on Wednesday.
U.S. media have criticized Pompeo and the State Department for hosting holiday parties during the pandemic. Enditem
U.S. Secretary of State Mike Pompeo speaks duringapress briefing in Washington D.C., the United States, Feb. 1, 2019. (Xinhua/Liu Jie)
Previous Article ကျူးဘားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကျူးဘားနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိသော မူဝါဒသည် လုံးဝကျဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြား
Next Article အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကလေးငယ်ပေါင်း ၁.၆ သန်းကျော် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံရ